War deg deg ah:- Masuuliyiin Puntland oo kusoo wajahan Dhahar, xagee bey ku sugan yihiin Somalilandse? | maakhir.com
War deg deg ah:- Masuuliyiin Puntland oo kusoo wajahan Dhahar, xagee bey ku sugan yihiin Somalilandse?
Boosaaso:- Magaalada Dhahar ee Gobolka Sanaag ayaa si toos ah waxaa gacanta ay ugu jirtaa Maamulkii ay usoo dhiseen Dowlad Goboleedka Puntland horaantii isbuucan hada dhamaadey, waxaana magaalada kusoo wajahan masuuliyiin sar sare oo ka tegaya Magaalada Boosaaso.
Warku waxa uu intaa ku darayaa in xaalada Magaaladu ay degan tahay oo dadweynuhu hawshooda ay si caadi ah u qabsanayaan iyadoo dadweynuhu ay ka xunyihiin in deegaankoodu noqday bar tilmaameed dagaal.
Waxaa intaa dheer in masuuliyiin Reer Puntland ahi ay hada kusii jeedaan Dhahar, waxaana la socda idaacadaha Maxaliga ah ee magaalada Boosaaso iyo Garoowe.
Ciidamo tiro Badan oo Puntland ay ayaa waxay hada u gudbeen dhinaca Xingalool iyagoo sida naloo sheegey ku raad jooga kuwii Somaliland oo hada isuku urursadey meel dhinaca Galbeedka ka xigta Shimbiraale oo ah deegaan Warsangeli.
Ciidamada Somaliland ayaa u eg kuwo laga adkaadey kadib markii shaleyto weerar sadex geesood ah lagu soo qaadey iyagoo markaa fooda is daray Ciidamada Daraawiishta oo kaashanaya ciidamo Beeleedyo u dhashey deegaanka.
Dhinaca kale goor aanu la xiriirney Magaalada Burco ayaa waxaa naloo sheegey in la sugayo dhaawac laga keeney Dhahar oo magaalada Burco soo gaari doona, waxaana intaa naloogu sii daray in Magaalada Caynabo dhaawac kale la geeyey.
Dowlada Somaliland ayaa ilaa iyo hada ka aamusan jabka ka qabsadey dagaalada Shaleyto iyo soo bixitaanka ay kasoo bexeen deegaanadaas.
Waxaana lagu tuhmayaa in Somaliland ay ka baqday in ciidankeedu uu dhahar Go’doon ku noqdo kadib markii ay roobab tiro badani ka de’een Gobolka oo aan la hayn wado laami ah, waxaana xirma wadooyinka aada Galbeedka sida tan tagta Magaalada Burco ee Gobolka Togdheer.
« War deg deg ah: Somaliland oo ka baxday Dhahar iyo Xinglool oo laga sii rasaaseyey, waa maxay sababtu?
Boosaaso: ” Shimbiraale ayaan dib ugu riixnay ciidankii suu doolay ee Somaliland” Wasiir kuxigeenka gudaha Puntland »